China calcined kaolin fekitari uye vagadziri Pairs Horse
Pepa indasitiri: calcined kaolin ink ine yakanaka yekumwa uye yakakwira yekuviga mwero, iyo inogona zvishoma kutsiva inodhura titanium dioxide. Inonyanya kukodzera kumhanya-kumhanya chiremba chipande machira. Calcined kaolin sekuzadza inogona zvakare kugadzirisa ekunyora nekudhinda zvimiro zvebepa, uye kuwedzera bepa. Iko kusasana, kutsetseka uye kubwinya kwepepa kunogona kugadzirisa kusagadzikana, kubvumidzwa kwemhepo, kushanduka, kudhinda uye kunyora zvimiro zvebepa, uye kudzikisa mutengo.
Bhabhatidza indasitiri: Iko kushandiswa kwecalcined kaolin mune yekumabhizimusi indasitiri kunogona kudzikisa huwandu hwetitanium yakasviba, kuita kuti iyo yekunamatira firimu ive nehunhu hwakanaka, uye nekuvandudza kugadziriswa, kuchengetedza uye kushandisa zvivakwa zvekupfeka. Huwandu hwecalcined kaolin hunoshandiswa pakati nepakati-yegiredhi kupfeka ndeye 10-30%, uye iyo calcined kaolin inoshandiswa inonyanya 70-90% ine -2um zvemukati
Ipurasitiki indasitiri: Muinjiniya mapurasitiki uye akajairwa mapurasitiki, iyo yekuzadza huwandu wecalcined kaolin ndeye 20-40%, iyo inoshandiswa seyekuzadza uye inosimbisa mumiririri. Calcined kaolin inoshandiswa mu tambo dzePVC kugadzirisa magetsi emagetsi epurasitiki.
Rubha indasitiri: Iyo indasitiri yerabha inoshandisa yakawanda kaolin, uye chiyero chekuzadza mumatanho erabha kubva pa15 kusvika 20%. Iyo calcined kaolin (inosanganisira pamusoro pekunatsurudzwa) inogona kutsiva kabhoni nhema uye chena kabhoni nhema kuti ibudise yakajeka-yerabha zvigadzirwa, matai, nezvimwe.
Pashure: Iron oxide Green
Zvadaro: Akashambidzwa Kaolin
Yakavezwa Kaolin Clay
Yakavezwa Kaolin Ye Refractories
Muchena Calcined Kaolin